China Transparent Masterbatch BT-800/810 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
BT-800/810 iri pachena mastbatch ine mutakuri wePP resin iine 5% kana 10% Kujekesa Mumiriri wechipiri chizvarwa, zvakafanana basa seBT-9803. Iyo inoshandiswa muPP neLLDPE.
BT-800/810: PP nebwe iine 5% kana 10% Kujekesa Mumiriri wechipiri chizvarwa, zvakafanana basa seBT-9803.
BT-800/810 inokodzera isina kukwana kristaro resin yePP & LLDPE nezvimwewo.Izvo zvinogona kuwedzera zvigadzirwa 'kujekesa uye kupenya kwepamusoro, kusimba kwesimba, kuomarara, kupisa kwekukanganisa kupisa uye kukura kwehukuru, kudzora kuumba kutenderera.
Nyukireya mumiririri imhando yemumiririri iyo yakakodzera kune asina kukwana makristasi epurasitiki akadai se polypropylene uye polyethylene. Nekuchinja iko crystallization maitiro einesi uye nekumhanyisa iyo crystallization chiyero, inogona kuzadzisa chinangwa chekupfupisa iyo yekuumba kutenderera, kuwedzera kujeka kwepamusoro gloss, kuomarara, kupisa kwemafuta kupisa, tensile simba uye kukanganisa kuramba kwezvakapedzwa zvigadzirwa.
Polymer yakagadziridzwa na Kujekesa Mumiriri,Izvo hazvichengetedze chete zvehunhu hwepakutanga zve polymer, asi zvakare iine nani poresi yemutengo chiyero pane zvakawanda zvinhu zvine yakanaka yekugadzirisa mashandiro uye hwakawanda hwekushandisa. Uchishandisa Nyukireya mumiririri mu polypropylene kwete chete kutsiva girazi, asi zvakare kutora nzvimbo yemamwe ma polymers senge PET, HD, PS, PVC, PC, nezvimwewo pakugadzira chikafu kurongedza, kurapwa kwekurapa, yetsika chinyorwa chekushandisa kwemazuva ese, kujekesa kuputira uye imwe yepamusoro giredhi tafura.
CHINA BGT inogona kupa yakazara yakazara ye Nyukireya mumiririri, akadai seClarifying Agent, Nucleating mumiriri wekuwedzera kuomarara uye β-Crystal Nucleating mumiriri. Izvi zvigadzirwa zvinogona kushandiswa muPP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM uye TPU nezvimwe.
Pashure: Kuomesa Nucleator BT-9806
Zvadaro: Transparent Masterbatch BT-805/820
Masterbatch Kujekesa Mumiriri